Kushongedza tsoka yemubhedha - Ndeipi fenicha yandingaisa? | Bezzia
Ndingashongedza sei tsoka yemubhedha
Susana godoy | 06/01/2022 14:00 | Simba
Shongedza tsoka yemubhedha Ndiyo imwe yesarudzo huru dzatinofanira kufunga nezvadzo. Nekuti kunyangwe ese fenicha uye zvese zviri pamutemo, dzimwe nguva tinogona kukanganwa yakakosha nzvimbo inogona kutibatsira zvakanyanya kuronga kamuri yedu.
Pane pfungwa dzakawanda dzatinofanira kufunga nezvazvo, kubvira Izvo zvichagara zvichibva pane zvaunofarira kana maitiro eimwe imba yako yekurara. Iva sezvazvingaite, kana iwe uchida kunakidzwa neyakakwana, yakanyanya kushongedza yepakutanga iyo inobvumidza iwe kuchengeta, saka usapotsa zvinotevera.
1 Shongedza bhodhi retsoka ne trunk
2 Isa sofa
3 Chitoro chemabhuku padivi pemubhedha
4 Sarudza bhangi
5 Bet pazvituru zviviri
Shongedza bhodhi retsoka ne trunk
Ndiyo imwe yemafungiro ekutanga anouya mupfungwa patinofunga nezvekushongedza bhodhi retsoka. Ichokwadi ndechokuti nekuda kweizvi, tinofanira kutaura kuti chitarisiko chake chakachinja zvikuru. Kunyange zvakadaro Kune mamwe mazambiringa emhando yenzvimbo ino yekamuri yekurara, unogona zvakare kusarudza mamwe mapeji ane mamwe marectangular maumbirwo. uye minimalist mhando mu wicker kana mu beige toni, semuenzaniso. Chero zvazvingava, izvo zvatiri zvakajeka ndezvekuti vanotibatsira nekuchengetedza uye mairi tinogona kuchengeta zvinhu zvose kubva pamashiti kusvika pajamas kana zvichidiwa.
Sezvatinoziva chaizvo, mhando dzesofa dzakanyanya siyana. Naizvozvo, zvirokwazvo pane imwe ichave yakakwana kune ino nzvimbo yeimba yekurara. Kune iyi nharaunda unogona kusarudza imwe ine backrest, iyo isinganyanyi kukwirira uye ine zvigaro zviviri. Kunyangwe iwo ayo ari divan maitiro anoonekwawo zvakanyanya. Sezvo ivo vakatetepa uye vakakwana kushongedza bhodhi retsoka pasina kuichaja zvishoma.
Chitoro chemabhuku padivi pemubhedha
Nenzira imwechete iwe unogona zvakare sarudza fenicha ine rectangular isina kureba. Nhasi nekuda kwezvose izvi modular fenicha, isu tichavawana pasina dambudziko. Iyo isarudzo yakakwana kuitira kuti iwe ugone kuve nemabhuku ako ese akarongeka. Saka, pahusiku hwausingagone kurara, hazvikuvadze kuzvirega uchitakurwa neimwe yeaya akadhindwa adventures. Ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekurega fungidziro yako ichimhanya. Iye zvino iwe unongofanira kusarudza fenicha ine masherufu uye mazviri, kuwedzera kune iwo mabhuku, iwe unogona kugara uchiisa mamwe ekushongedza zvinhu nenzira yemabhokisi kuti uenderere mberi nekuchengeta zvishongedzo zvako zvidiki.
Hongu, zvakare imwe yeidzo sarudzo dzisingagone kusiiwa nekuti pasina kupokana, tichazviona mukushongedza kwakasiyana. Unogona kugara uchitsvaga a bhenji iri nyore, rustic kupera uko huni nguva dzose ndiyo huru. Asi sezvo isu tichiti pane sarudzo, iwe unowana dzakawanda dzimwe nzira dzaungade. Nokuti iwe unogonawo kuishandisa sechigaro, kukwanisa kuisa shangu, somuenzaniso. Kana pasi payo, isa mamwe mabhasikiti kana mabhokisi anoramba achibhejera pane chengetedzo yatinoda zvakanyanya.
Bet pazvituru zviviri
Kunyangwe chiri chokwadi kuti isu tinogara tichitaura pfungwa yechinhu chakazara chefenicha, haifanirwe kudaro nguva dzose. Sezvo isu tichigonawo kuita yekushongedza neruoko rwe zvigaro zviviri, Semuyenzaniso. Nokudaro, tinogona kuvaisa pamagumo emubhedha uye kwete nechepakati. Asi iwe chete une izwi rekupedzisira! Mukuwedzera, zvigaro zvinogona kuva nepamusoro pepamusoro, sezvo zvingava mabhenji akareruka kana kuguma mumhando yemutsara wakasununguka. Sezvawaona, sarudzo dzakasiyana-siyana zvekuti mumwe nemumwe wedu achawana iyo inonyatsoenderana nekushongedza kwedu. Chii chingave chakanakisa kushongedza tsoka yemubhedha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Simba » Ndingashongedza sei tsoka yemubhedha
Nzira yekudzivirira sei kuderedzwa kwebasa
Unoda kutora mifananidzo here? Nakidzwa nezviratidzwa zvitanhatu izvi